UKUTYA OKUYEKA UKUHLANZA NGEXESHA LOKUHAMBA- PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Ukutya Okuyeka Ukuhlanza Ngexesha Lokuhamba
Ekhaya Impilo Impilo-ntle Wellness oi-Iram Ngu Iram zaz | Ipapashwe: NgoMvulo, nge-29 kaJuni 2015, 1:37 [IST]
Abanye abantu bafumana isicaphucaphu, ukugabha kunye nesiyezi ngelixa beseluhambeni. Oku kubizwa ngokuba sisifo sokuhamba kwaye kubangelwa kukuphazamiseka kwezixhobo ze vestibular ezindlebeni ngexesha lokuhamba (ukuhamba).
Umntu unokugabha ngexesha lokuhamba kwaye oku kwenza ukuba ahambe awona mava mabi kuye. Ukuhlanza kubangela ubuthathaka, ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nokulahleka kwee-electrolyte emzimbeni. Ukugabha okungagungqiyo kunokuba yingozi njengoko kunokubangela ukuphelelwa ngamandla emzimbeni.
Iindlela ezi-5 ezilula zokuNyanga ukungabikho kwamanzi emzimbeni ngelixa uhamba
Ke ngoko, abantu bathabatha amayeza ngaphambi kokuhamba ukuthintela isicaphucaphu kunye nokugabha. Nangona kunjalo, la mayeza anokubangela ukozela. Umntu akakwazi kuhlala esebenzayo ngexesha lokuhamba emva kokuthatha amayeza anjalo.
Kukho amayeza asebenzayo ekhaya onokuba nawo ngaphambi kokuhamba uyeke isicaphucaphu kunye nokugabha. Unokuqiniseka ukuba olu nyango aluyi kukwenza wozele.
Iingxaki Zesisu Xa Uhamba
Ungayifaka njani iMayonnaise kwizinwele
Jonga amanye amayeza asekhaya ayeke isicaphucaphu nokugabha ngaphambi kohambo.
Ijinja yaziwa ngokuba yi-antiemetic (eyeka ukugabha). Ikwanceda ekucoleni ukutya. Kuya kufuneka ube unayo iti yejinja ngaphambi kokuhamba ukuba uyagabha. Le yenye yeendlela ezilungileyo nezikhuselekileyo zokuyeka ukugabha okwenzeka ngexesha lokukhulelwa.
Nciphisa itispuni yeapile cider iviniga ngamanzi athile (ikomityi enye). Vasa nje umlomo wakho ngesi sisombululo ngaphambi kokuhamba okanye xa uziva undotyiwe. Iyakuyeka isicaphucaphu nokugabha ngokukhawuleza.
Iti ye-Mint iyanceda ukuyeka ukugabha. Unokwenza ngokulula ikomityi yeti yeminti ngokubilisa amagqabi eminti okanye amatsha amatsha emanzini kunye nokongeza ubusi kwi-mint extract. Unokuhlafuna amagqabi eminti ukuba usendleleni. Ivumba layo liyanceda ukuyeka isicaphucaphu nokugabha.
ICinnamon yenye yezona zinto zidume kakhulu ngokuchasene ne-emetics. Unokwenza iti yesinamoni ngokubilisa iinkuni zesinamoni emanzini. Yongeza ubusi kuyo ukongeza incasa yayo. Kukwanikwa amanenekazi akhulelweyo ukuthintela ukugula kwasekuseni nanjengenye yezona ndlela zikhuselekileyo nezisebenzayo zokuyeka ukugabha ngexesha lokukhulelwa.
Amanzi erayisi anestatshi kwaye aya kuyithomalalisa iasidi esebenzayo yesisu ngaloo ndlela, ayeke isicaphucaphu kunye nokugabha. Bilisa irayisi emhlophe emanzini kwaye mayiyibilise kangangexesha elithile. Yiba namanzi anesitatshi emva kokuba sele epholile. Iya kubonelela ngesiqabu kwangoko ekugabheni.
Iyeka ukugabha kunye nobucaphucaphu nangoko. Sila itswele kwindawo yokusila uze ucofe ijusi ngaphandle. Ungayixuba kunye nencindi yepepermint. Olu dibana luya kusebenza ngokumangalisayo ekupheliseni isicaphucaphu kunye nokugabha.
Ukuyeka ukugabha kunye nobucaphucaphu, hlafuna ezinye iigloves kwaye uziginye. Unokuba nobusi obuncinci kunye nayo ukuphucula incasa. Cloves nazo zilungele isisu sakho kwaye zikwanceda ukwetyisa.
Ukuhlafuna cardamom nga kwangoko uyeke isicaphucaphu nokugabha. Kuya kunceda nasekucoleni ukutya kunye nokukhusela ukudumba. Unako kwakhona ukuba nekhadiyamam kunye netiye yesinamon.
Pepper kunye neLamuni
Kukhulula intloko ebuhlungu, isicaphucaphu kunye nesiyezi. Xuba ityuwa okanye ipepile kwijusi yelamuni efudumeleyo uyisele ngaphambi kokuba uhambe. Oku kuya kuthintela isicaphucaphu nokugabha.
indlela yokunciphisa amayeza e-uric acid
Hlanganisa i-cumin powder emanzini uze uyisele ngaphambi kokuba uhambe. Iya kunika ukukhululeka kwangoko kwisicaphucaphu kunye nokugabha.
Iyeka isicaphucaphu nokugabha kwangoko. Hlafuna ezinye zivulelwe ukukhutshwa ngokukhawuleza ekugabheni ngexesha lokuhamba. Unokwenza iti ene-anise kwaye ube nayo ngaphambi kokuqhubeka kohambo.
indlela yokulahla iinwele ezimhlophe kulutsha
njani ukucofa intombazana etshatileyo
iziphumo zesondo kakhulu
I-bengali chana dal iresiphi kwi-hindi
indlela yokufumana ubulungisa kwangoko ngokwendalo
indlela yokwenza iibhobhs zikhule ngokukhawuleza